Sida loogu daro saxiixa Gmail ee Android e-mailkaaga | Androidsis
Sida loogu daro saxiixa iimaylkaaga Gmail ee Android
Gmail waa codsi muhiim u ah taleefannadeena Android, taas oo aan u isticmaalno ficil ahaan maalin kasta. Isticmaalayaal badan ayey xitaa muhiim u tahay maxaa yeelay waxay u isticmaalaan shaqo, sidoo kale taleefankooda. Sidaa darteed, kiiskaaga waxaa jira shaqooyin gaar ah oo ku jira dalabka oo muhiimad gaar ah leh, sida jadwalka loogu diro ama jawaabaha otomaatiga ah isku mid ah
Hawl sidoo kale xiiso u leh isticmaaleyaasha isticmaala Gmail on Android waa inuu ku yeesho saxiixa e-mayllada ay diraan. Saxeexan sidoo kale waxaa laga abuuri karaa taleefan. Markaa haddii aad ka fikireysay inaad ku darto saxiix emailkaaga mobilkaaga, waa suurtagal.
Saxeexyada ku jira dalabka waraaqaha ayaa aad u badan. In kastoo waxaan badanaa ka abuurnaa mid kombiyuutarka. Laakiin sidoo kale waxaa naloo siiyay suurtagalnimada inaan ku abuuri karno saxiixa aaladda, si aan u helno saxiix fudud oo ka gaaban, kaas oo lagu soo bandhigi doono emayllada aan dirno adoo adeegsanaya taleefannadeenna Android. Tani waa geedi socod aad u fudud oo la raaco.
1 Abuur saxiixa Gmail-ka ee Android
2 Kala duwanaanshaha saxeexa caadiga ah
Abuur saxiixa Gmail-ka ee Android
Marka ugu horeysa waa inaan sameynaa fur barnaamijka Gmail ee loogu talagalay Android taleefanka. Codsiga gudahiisa waa inaan soo bandhignaa liiska menu-ka, halkaas oo aan ka helno xulashooyin taxane ah oo la heli karo. Waa inaan ku sibir-saarnaa dhamaadka menu-ga la dhaho, oo ah meesha aan ka helno xulashada Dejinta. Waxay ku jirtaa xulashadan meesha ay tahay inaan galno kiiskan.
Goobaha waxaan ka helnaa seddex ikhtiyaar. Waa inaan gujino koontada emaylka ee aan rabno inaan galno ayuu ku yidhi saxiixa email-keena. Haddii aad leedahay akoonno dhowr ah oo xiriir la leh barnaamijka, waa inaad doorataa midka aad hadda rabto inaad ku saxiixdo saxiix. Guji kootada la sheegay iyo menu-yada dejinta ayaa markaa furi doona, halkaas oo aan ka helno taxane ah qaybo kala duwan.
Liiskan waa inaan xoogaa ku rogrogno, illaa aan ka gaarnno qaybta saxiixa. Markaad gujiso, daaqad cusub ayaa ka furaysa shaashadda, halkaas oo aan awood u yeelan doonno deji saxiixa aan dooneyno inaan ku isticmaalno Gmail-ka Android. Si ka duwan saxiixa kumbuyuutarka, wuxuu leeyahay xaddidaadyo badan. Fikradda ayaa ah inaan u isticmaalno saxiix gaaban kiiskan, kaas oo aan awoodi doonno inaan u qaabeyno sida aan u jecel nahay dareenkan. Markii saxiixani la galay, waxaan gujin karnaa si aan u keydinno saxiixana horay ayaa loogu sameeyay e-maylada aan ka soo dirno Android.
Kala duwanaanshaha saxeexa caadiga ah
Haddii aad sameysay saxiix akoonkaaga Gmail horay, waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxa waxaa jira kala duwanaansho arrintan la xiriira. Saxeexa aan ku abuuri karno Android-ka ayaa aad uga fudud kana gaaban. Maaddaama kumbuyuutarka aan ku haysanno tifaftire qoraal yar oo aan ku abuuri karno saxiix, una oggolaanayna inuu sii dheeraado, marka lagu daro awood u lahaanshaha xulashada font, cabirka ama xitaa haddii aan dooneyno inaan adeegsanno farriimo ama geesinimo. Marka kani wuxuu leeyahay xadeyn cad.
Dhinaca kale, saxiix kumbiyuutarka waxaan ku haysannaa fursad aan ku darno sawirro. Dad badan ayaa saxiixayagan kudarsada sawirkooda, ama astaan ​​shirkadeed. Nasiib darrose, xaaladda Gmail ee ku jirta Android tani macquul maahan. Saxeexa ay tahay inaan ku darno kiiskan wuxuu ka kooban yahay oo keliya qoraalka. Marka ma noqon doonto mid dhameystiran inta isticmaaleyaal badani u baahan karaan ama rabaan, laakiin ugu yaraan waxaan ku lahaan karnaa saxeex e-mayllada laga diro taleefanka.
Sida nooca caadiga ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan bedelno saxiixaan markasta oo aan doonno, ama ka saar gebi ahaanba. Saxiixu wuu ka duwanaan doonaa iyadoo kuxiran boostada aan dirno. Haddii laga soo diro kombiyuutarka, qofku wuxuu arki doonaa saxiix ka duwan kan aan email uga dirno Android. In kasta oo aysan u noqon wax dhib ama dhibaato qof kasta oo arrintan la xiriira. Weligaa ma isticmaashay saxiixeeda Gmail?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loogu daro saxiixa iimaylkaaga Gmail ee Android
Sida loo diro farriimo bilaa dhawaaq ah Telegram